स्कोरिंग सामाजिक संलग्नता | Martech Zone
धेरै बजारहरू ग्राहकहरूसँग संलग्न हुन, ब्रान्ड सचेतना निर्माण गर्न र सीसा उत्पन्न गर्न सामाजिक मिडियाको प्रयोगको महत्त्व बुझ्दछन्, तर धेरै कम्पनीहरू अझै पनि स struggle्घर्ष गर्दछन्। कसरी तपाईं व्यक्तिगत स्तरमा संभावनाहरू संलग्न गर्नुहुन्छ, तपाईंको कम्पनीको मूल्य प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र अन्तमा तिनीहरूलाई ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ?
एक व्यवसाय को लागी हजारौं ट्विटर अनुयायीहरु को लागी सानो मूल्य छ यदि कसैले तपाईबाट किन्दै छैन। यो परिणामहरू मापन गर्न र सजिलैसँग पहिचान गर्न मिल्छ कि यदि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ काम गर्दैछ भने।
राइट अन इन्टर्एक्टिवमा हामी सफलतालाई मापन गर्ने उत्तम तरिकाहरू पत्ता लगाउन केन्द्रित छौं, र हामी यो स different्लग्नताको विभिन्न स्तरहरू स्कोर गरेर गर्छौं। दाँयाको स्कोरि engine ईन्जिनले तपाईंको ब्रान्ड वरपर सबै गतिविधि र अन्तर्क्रिया ट्र्याक गर्दछ। हामी सामाजिक संलग्नता स्कोर गर्दै छौं।
उदाहरणको रूपमा ईमेल हेरौं। तपाइँ तपाइँको संभावना मासिक ईमेल न्यूजलेटर पठाउनुहोस्। जो कोही जसले यसलाई खोल्दछ एक पोइन्ट प्राप्त गर्दछ। यदि तिनीहरूले ईमेलमा लिंकमा क्लिक गरे भने त्यो अर्को कुरा हो। यदि तपाइँको वेब पृष्ठ मा जानुहोस्, तिनीहरूले अधिक अंक कमाउन। सब भन्दा बढि अंकका साथ प्रापकहरू ती हुन् जो धेरै व्यस्त छन्।
दाँयामा नयाँ ट्विटर एकीकरण सामाजिक मिडियामा उही अवधारणा ल्याइरहेको छ।
मार्केटरको ट्विटर खाता वरिपरि भइरहेको सबै गतिविधि ट्र्याक गरेर हामी त्यो गतिविधिलाई दायाँ ओनको स्कोरिंग ईन्जिनमा तल तान्न र स values्लग्नताको विभिन्न स्तरहरूमा मानहरू प्रदान गर्न सक्षम छौं।
किन ROI को सामाजिक स्कोर भिन्न छ
त्यहाँ हालका धेरै ट्विटर उत्पादनहरू एम्पलीफायर उत्पादनहरू छन्। तपाइँले एक सामाजिक मिडिया खातामा केहि पोष्ट गर्नुभयो र आशा छ कि यसले रिट्वीज प्राप्त गर्दछ ताकि यो व्यापक दर्शकहरूमा पुग्न सक्छ। यो लगभग राजमार्गमा बिलबोर्ड राख्नु जस्तै हो र धेरै व्यक्तिले यो आशा राख्छन्।
दायाँ अन्तर्क्रियात्मकमा हामी स्कोरि and र सment्लग्नतामा केन्द्रित छौं, प्रवर्धन होइन। हामी खरीद सिग्नलहरू पहिचान गर्न र स्कोर गर्नमा रुचि राख्छौं। ग्राहकहरूलाई उनीहरूको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग प्रयासहरूको अर्थ दिनको लागि मद्दत गरेर उनीहरूले कुन रणनीतिहरू सबैभन्दा प्रभावकारी छन् चाँडो हेर्न सक्छन्।
आरओआईको सामाजिक स्कोरिंग पूर्ण अनुकूलन योग्य छ
एकीकरणले ट्विटर खाता वरपरका सबै डाटालाई नयाँ अनुयायीहरू, ब्रान्ड उल्लेख, रिट्वीट र सीधा सन्देशहरू तान्दछ। यी गतिविधिहरू मध्ये कुनै पनि सment्लग्नता पोइन्ट तोक्न सकिन्छ, मार्केटरले स्कोर नियन्त्रण गर्दै। यो पूर्ण रूपले अनुकूलन योग्य छ।
उदाहरण को लागी, नयाँ अनुयायीले एक बिन्दु प्राप्त गर्न सक्दछ। एक रिट्वीट दुईको लायक हुन सक्छ। यदि एक सम्भावितले सन्देशलाई खातामा सन्देश गर्दछ कि १० अ worth्कको लायक हुन सक्छ। बजारहरूले सment्लग्नता गतिविधिमा उनीहरूलाई मान दिन सक्छन् जुन उनीहरूलाई लाग्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छन्।
ROI सामाजिक स्कोरिंग को माध्यम बाट हट लीड्स को पहचान
नयाँ ट्विटर एकीकरण अब एक मानक सुविधा हो दायाँको स्कोरिंग सफ्टवेयर। यो तपाइँ बेनामी अनुयायीहरु लाई तपाइँको कम्पनी डेटाबेस मा वास्तविक संपर्कहरु मा बदल्न दिन्छ। कम्पनीको ट्वीटर सम्पर्कहरू र यो डाटाबेस जडान मार्केटिंग टीमलाई ब्राण्डको वरपर स engage्लग्नताको सबै पक्षहरूलाई राम्रोसँग लाभान्वित गर्न अनुमति दिन्छ।
अझ रमाईलो सुविधाहरू मध्ये एकले मार्केटरहरूलाई तातो लीडहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, जुन ती प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले छोटो अवधिमा धेरै सment्लग्नता र अन्तर्क्रिया सिर्जना गर्छन्। ती प्रयोगकर्ताहरूलाई छिटो पहिचान गरेर, तपाईं तत्काल बिक्री टोलीमा तातो नेतृत्व लिन सक्नुहुनेछ।
यो सिर्फ एक मात्र तरीका हो राइट अन इन्टर्एक्टिवले व्यवसायलाई सामाजिक मिडिया गतिविधिलाई अधिकतम बनाउनमा मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।
दायाँ अन्तर्क्रियात्मक मार्केटि auto स्वचालन प्रायोजक हो Martech Zone.
टैग: फेसबुक स्कोरिंगनेतृत्व स्कोरिंगलिंकइन स्कोरिंगसम्भावित स्कोरिंगसहि अन्तर्क्रियात्मकमासामाजिक स्कोरिंगट्विटर स्कोरिंग